ယနေ့ကံကြမ္မာ - မင်းသိမ်းခိုင်(ရွှေရမ်းထူးလင်း)
(တစ်နေ့မှာ (၂)ခုအနက် တစ်ခုသာ မေးနိုင်ပါသည်)
သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို သင့်ထက် တားရော့ လို့ခေါ်တဲ့ နိမိတ်ဖတ် ကတ်ပြားလေးတွေက ပိုသိနေပါတယ်
သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို … သင့်ထက် .. တားရော့ လို့ခေါ်တဲ့ … နိမိတ်ဖတ် ကတ်ပြားလေးတွေက ပိုသိနေပါတယ်... တား ဆိုတာ …လမ်း … ရော့ ဆိုတာ ရွှေနန်းတော် … ရွှေနန်းတော်သို့ သွားရာလမ်း လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ် … မိမိရောက်ချင်နေတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို…အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် …မှန်မှန်ကန်ကန် လမ်းညွှန်ပေးမယ့်… နိမိတ်ဖတ် ကဒ်ပြားလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် …. တားရော့ ကတ်ပြားလေးတွေကို …ယုံယုံကြည်ကြည် လေးလေးနက်နက် တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင် … တားရော့ကတ်ပြားလေးတွေကလည်း … လေးလေးနက်နက် မှန်မှန်ကန်ကန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဖြေတွေ ထုတ်ပေးပါ့လိမ့်မယ် ….တားရော့လို့ခေါ်တဲ့ နိမိတ်ဖတ်ကတ်ပြားလေးတွေကို အကျိုးရှိရှိ ကောင်းစွာ အသုံးချတတ်မယ် ဆိုရင် … မိမိရဲ့အနားမှာ သွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့ ဗေဒင်ဆရာတစ်ယောက် ရှိနေသကဲ့သို့ … ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်း အကျိုးအကြောင်းတွေကို … လမ်းညွှန်ပေးနေပါလိမ့်မယ် … တားရော့ လို့ခေါ်တဲ့ နိမိတ်ဖတ် ကဒ်ပြားလေးတွေကို … ကောင်းစွာ အသုံးချပြီး … မိမိရည်မှန်းထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေ ….
မင်းသိမ်းခိုင် ( ရွှေရမ်းထူးလင်း )
ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် မှန်သော... ကိန်းဂဏန်း ဗေဒင်ဟောကိန်းများ ဖြစ်ပါတယ်
ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် မှန်သော... ကိန်းဂဏန်း ဗေဒင်ဟောကိန်းများ ဖြစ်ပါတယ် ...။ စိတ်မခိုင်သူများ ၊ ကြောက်တတ်သူများ မကြည့်ပါနဲ့။ ကျော်သွားလိုက်ပါ။
ကောင်းသောဟောချက်များ သွေးထွက်အောင် မှန်ကန်၍ ၊ မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲချော်ပါစေသတည်း ...
တားရော့ (သို့) ကိန်းဗေဒင် ကြည့်ရန် အတွက် အကောင့်အရင် ၀င်ရပါမည်။ အကောင့်မရှိပါက ဤနေရာ တွင် အကောင့်ဖွင့်ပါ။
မွေးသက္ကရာဇ် နှင့် နေ့သား ထည့်တွက်ရုံဖြင့် ယခုနှစ်၏ သင့်ကံကြမ္မာ အကျိုးအကြောင်း အဆိုး အကောင်း နှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ယတြာများကို သိရှိနိုင်မည်။
တသက်တာ အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် အခြား ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို သိရှိနိုင်မည့် ဘ၀ တစ်သက်စာ ဟောကိန်းများ
သင့် မွေးဂဏန်းအား ရွေး၍ ကြည့်ပါ။
ဘ၀မှာ သင့်ကို လွှမ်းမိုးနေတဲ့ နံပါတ်က ဘာလဲ?
ရက် ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀ ၃၁
လ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂
ခုနှစ် ၂၀၁၆ ၂၀၁၅ ၂၀၁၄ ၂၀၁၃ ၂၀၁၂ ၂၀၁၁ ၂၀၁၀ ၂၀၀၉ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ ၂၀၀၆ ၂၀၀၅ ၂၀၀၄ ၂၀၀၃ ၂၀၀၂ ၂၀၀၁ ၂၀၀၀ ၁၉၉၉ ၁၉၉၈ ၁၉၉၇ ၁၉၉၆ ၁၉၉၅ ၁၉၉၄ ၁၉၉၃ ၁၉၉၂ ၁၉၉၁ ၁၉၉၀ ၁၉၈၉ ၁၉၈၈ ၁၉၈၇ ၁၉၈၆ ၁၉၈၅ ၁၉၈၄ ၁၉၈၃ ၁၉၈၂ ၁၉၈၁ ၁၉၈၀ ၁၉၇၉ ၁၉၇၈ ၁၉၇၇ ၁၉၇၆ ၁၉၇၅ ၁၉၇၄ ၁၉၇၃ ၁၉၇၂ ၁၉၇၁ ၁၉၇၀ ၁၉၆၉ ၁၉၆၈ ၁၉၆၇ ၁၉၆၆ ၁၉၆၅ ၁၉၆၄ ၁၉၆၃ ၁၉၆၂ ၁၉၆၁ ၁၉၆၀ ၁၉၅၉ ၁၉၅၈ ၁၉၅၇ ၁၉၅၆ ၁၉၅၅ ၁၉၅၄ ၁၉၅၃ ၁၉၅၂ ၁၉၅၁ ၁၉၅၀ ၁၉၄၉ ၁၉၄၈ ၁၉၄၇ ၁၉၄၆ ၁၉၄၅ ၁၉၄၄ ၁၉၄၃ ၁၉၄၂ ၁၉၄၁ ၁၉၄၀ ၁၉၃၉ ၁၉၃၈ ၁၉၃၇ ၁၉၃၆ ၁၉၃၅ ၁၉၃၄ ၁၉၃၃ ၁၉၃၂ ၁၉၃၁ ၁၉၃၀ ၁၉၂၉ ၁၉၂၈ ၁၉၂၇ ၁၉၂၆ ၁၉၂၅ ၁၉၂၄ ၁၉၂၃ ၁၉၂၂ ၁၉၂၁ ၁၉၂၀ ၁၉၁၉ ၁၉၁၈ ၁၉၁၇ ၁၉၁၆
သင့်ကို လွှမ်းမိုးနေသော နံပါတ်
Website နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုသည်များအား ပေးပို့ရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်
Copyright © 2016 Today Fortune Facebook